Uganda oo markii u horeysay ciidamo dhinaca cirka ah u soo direysa Soomaaliya – STAR FM SOMALIA
Saraakiil ka tirsan Milateriga Uganda ayaa sheegay in qorshahan uu yahay sidii loogu taageeri lahaa Ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya.
Sidoo kale Saraakiisha ayaa sheegay in Midowga Afrika arrintan kala shaqeyn doonaan, maadaama mas’uuliyad weyn ka saaran tahay howl galka AMISOM.
Qorshaha dhinaca cirka ah ayaa qeyb ka ah diyaaradaha shixnadaha qaada, kuwa qumaatiga u kaca iyo kuwa deg dega ee taageeraya Ciidamada AMISOM, xilliga ay howl galka ka wadaan Soomaaliya.
Howl galka AMISOM ayaa laheyn diyaarado dagaal, marka laga reebo dowladda Itoobiya oo adeegsata diyaaradaha qumaatiga u kaca.
Uganda ayaa ah dalka ugu badan ee ciidamada ka socda Midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya, waxaana ay xarumo ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolada dalka.